Yonke into esiyaziyo malunga neekati zikaTaylor Swift - Ukuzonwabisa
Ukuba Ngumzali Ekhaya Iindaba Zefashoni Diy Umindiya Ifashoni Yomtshato Gynaec Buza Ingcali Ngamazwe Iinwele
Yonke into esiyaziyo malunga neekati zikaTaylor Swift
Kwixwebhu leNetflix Nkosazana Americana Siza kubona icala likaTaylor Swift uninzi lwabantu abakolu luhlu abanakuze balinge ukwabelana nehlabathi. Kwindawo eluhlaza engemva kwemiboniso kunye nevidiyo ezisondeleyo, abaphulaphuli basondela kwaye babodwa kunye nemvumi yomthandi, bebona ukuba usengozini kangakanani kwaye unzima kangakanani ngokweemvakalelo. Owu, kwaye unetalente elihlekisayo lokuqalisa (kodwa besisazi ukuba sele kunjalo).
Ngelixa sasiqhubeka ngokunyaniseka kwakhe (oko kwamkelwa kwe-burrito!), Kwakukho umbuzo omnye esasizibuza wona njengoko sasibukele i-doc ebambekayo: Kwenzeka ntoni ngeekati zikaTaylor Swift? Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga neenwele zakhe ezinoboya.
Iposi elabiwe nguTaylor Swift (@taylorswift) NgoDisemba 14, 2019 kwi-8: 02 am PST
1. UTaylor Swift uneekati ezintathu
Iikati ezintathu zikaSwift zibizwa ngokuba nguMeredith Grey, uOlivia Benson kunye neBenjamin Button.
Wayithiya ikati yakhe yokuqala yaseScotland eyiFold emva komlinganiswa ophambili, uMeredith Grey (odlalwa ngu-Ellen Pompeo), ukusuka kwidrama yonyango Indawo egreyi . U-Swift ungumlandeli womboniso kangangokuba wade wacela uPompeo ukuba enze i-cameo kwividiyo yakhe yomculo 'egazi elibi'.
Imvumi yafumana ikitshi yesibini yaseScotland eSpain ngo-2014 wayithiya ngegama lomnye umlinganiswa weTV: UOlivia Benson (odlalwa nguMariska Hargitay) kwidrama yolwaphulo-mthetho Umthetho kunye noMyalelo: SVU . IHargitay kanjalo wenze ukubonakala kwividiyo ka-Swift 'yeGazi elibi'.
Kwaye ukuba awunakuqikelela: UBenjamin Button ubizwa ngegama lomlingiswa kaBrad Pitt kwifilimu Ityala elinomdla kwiButton Button. Ngokudabukisayo, uPitt akakaveli nakwezinye iividiyo zomculo zikaSwift.
uluhlu lweefilimu zothando lwehollywood
Iposi elabiwe nguTaylor Swift (@taylorswift) ngoMeyi 29, 2019 kwi-8: 17 pm PDT
2. Kwaye zikhangeleka okwebhere encinci
'Iikati zam zingqukuva zintle kwaye ziyabhidlika kwaye zibukeka njengeebhere ezincinci-zihlala zilala,' Swift uthe Kwinkulumbuso ka-Andrew Lloyd Weber Amakati umculo wemovie, apho uSwift wayenendima encinci. Nabantu abafungayo ukuba 'abayikati bantu' kufuneka bavume ukuba bavakala bebahle.
3. Zontathu iikati zaKhe zenza iCameo kum! Ividiyo yomculo
Ngapha koko, iBenjamin Button yamkelwa ngokuseta emva kokuba uSwift ewile ngokupheleleyoiinyawoizithende zomfazi oswiti.
UTaylor utyhile yamkela ikati Ngelixa urekhoda ividiyo yomculo nge UBrendon Urie ovela kwiPanic! kwiDisco.
'[Umphathi] undinike le kati incinci kwaye uqala nje ukuhlamba kwaye ... undijonge ngathi,' Ungumama wam, kwaye siza kuhlala kunye. 'Ndathandana. Ndijonge uBrendon kwaye unje, 'Uya kuyifumana ikati, akunjalo?' 'Ucacisile.
Ungambona uMeredith kunye no-Oliva bethetha esofeni kwividiyo engentla ngo-00: 24, ngelixa uBenjamin ebonakala ngathi ujikeleze u-2: 10.
Unyango lwe-fungal ekhaya
4.I-Swift ine-Cat ekhethekileyo kubhegi kwizilwanyana zayo zasekhaya kwaye nawe unakho
Enye yeemifanekiso ezithandekayo ukusuka WaseMelika U-Swift wayehamba ezantsi kwejethi yakhe yabucala ethwele i-cutoff denim ibhulukhwe emfutshane kunye nebhedi yekati. Qaphela: Le yayingeyiyo eyakhelwe ikati okanye iprintwe ngengxowa. Le pakethi ye-astronaut-esque yenzelwe ngokukodwa ukuthwala iikati. Kwaye le bhegi ivunyiweyo ka-Taylor Swift unokuba ngowakho nge- $ 52 nje. Jonga wena, uhlala njengeenkwenkwezi zepop (kulungile, ubuncinci uMnu.Jingles).
Ezinxulumene: Yintoni i-Taylor Swift yeNet efanelekileyo?
Izigaba Imikhwa Impilo Yengqondo Ikhitshi Elizinzileyo
Incoko yeNgcali: Ungawukhetha njani umsebenzi ochanekileyo
'Naku kuthi' Ixesha lesi-3, Isiqendu 1 Ukurekhoda: Isifungo seOprah
Ungayifumana njani iGrisi ngaphandle kweengubo ngaphambi kokuba iNgcolise okanye imise ngaphakathi
Nantsi indlela uVarun Dhawan kunye noNatasha Dalal bawela ngayo eluthandweni
Sivavanye iRazors eziGqwesileyo ezili-18 zaBasetyhini sazibeka ukusuka 'kwi-Ouch' ukuya ku-'Oooh, Oko kuyabetha '
Izizathu ezi-7 zokuba intombi yakho ibandakanyeke kwezemidlalo, ngokweNzululwazi
I-We Vibe Touch X Vibrator yinto yokudlala ngesondo kunye nesixhobo soBuhle Konke kuKunye
Ukubetha ubushushu behlobo ngezi Hues kweli xesha lonyaka
UJustin Timberlake Wabelana ngeZithombe eziRare kakhulu kuNyana kaSilas
Iikati ezili-10 ezilungileyo kakhulu zaBantwana
I-14 ye-Kid-Friendly Recipes yoSapho lonke luya kudla
Uyithengisa njani into yakho kwiCraigslist- kwaye ngenene wenze imali
Ukucwangciswa Kunye Neengcebiso
Izinto ezi-7 zekhephu ezenziwayo ngaphakathi nakwiLos Angeles
Ukutya oku-5 okuSebenzayo (kunye no-3 Ongasebenziyo), ngokukaNondlo
Dibana ne-Wolf Sika, iViral TikTok yokucheba iinwele ukuba iGen Z ayinakufumana ngokwaneleyo
Ezi ziiMveliso ezi-11 eziDume ngokuBalaseleyo kwiAmazon (FYI, Zonke zinokuPhononongwa okungu-10,000 +)
31 Izidlo ezisecaleni zeCarbuliflower ezisecaleni
nyathela ngocingo olusikiweyo lweenwele ezimfutshane
imidlalo iqela iqela abadala
umthambo ukunciphisa isisu kunye nesinqe
indlela yokulawula ukuwa kweenwele zam
Uluhlu lweefilimu zembali yehollywood
Unyango lwe-hairfall kunye ne-dandruff